Linux inotsigira Apple Silicon M1? Ivo vatove kushanda pairi | Linux Vakapindwa muropa
Linux inotsigira Apple Silicon M1?
Isaac | | GNU/Linux, Kernel, Noticias
Linus Torvalds akatoratidza kuti angade kushanda muzvikwata zveARM, uye kuti angade zvitsva Apple Silicon, iyo M1, Linux inotsigirwa. Asi zvakare akajekesa kuti aisakwanisa kuwana mabhizinesi anobatanidzwa kutsigira Linux kernel papuratifomu iyi.
Zvino, zvinoita sezvakafanana kuvandudza iyo yakaunza Linux rutsigiro kune iyo Sony PlayStation 4 (PS4) mutambo weconsole, yakaiswawo chinangwa chekuunza Linux kuApple Silicon. Kune rimwe divi, isu hatisati tichifanira kukumbira kukunda, inzira yakaoma, saka tichafanirwa kungwarira uye kuona kuti zvese izvi zvinopera sei ...
Nekudaro, zvakanaka kuti uzive kuti kubva pasoftware padivi pane zvatoedza izvo ichatanga kubereka michero kugadzirisa akasiyana masisitimu ayo ave kushanda neX86 kune ino nyowani Apple Silicon ARM-based chikuva, senge M1. Uye kwete chete Linux yakasiyiwa kunze neshanduko iyi, zvakare Microsoft Windows 10, kana mapurojekiti anozivikanwa senge Docker. Muchokwadi, iyo yekupedzisira haina kana kushanda naRosetta nekuti inovimba neIntel's virtualization extensions.
Iye anovandudza wandiri kutaura nezvake akatoratidza kugona kwake nekutakura Linux kuPS4, asi icho chinhu chimwe, uye zvimwe zvese zveApple M1 (uye neecosystem yayo yese) ndeimwe. Zvinoda maawa marefu ekushanda, matambudziko mazhinji ekugadzirisa, uye madhivhosi makuru ekushandura kweinjiniya. Ndokunge, hazvizove chinhu chehusiku, uye pamwe kana zvazadzikiswa kuchave nekufambira mberi mumunda wehardware yakanangana neshanduro nyowani ...
Parizvino, uyu anovandudza, anonzi Hector Martin, yakagadzira mushandirapamwe wezvemari papuratifomu yePatreon kuitira kuti uwane rubatsiro runodiwa rwemari. Iye pachake akataura «Apple ichangoburitsa renji nyowani yeARM-based Apple Silicon Macs uye ivo vanoputisa iwo wega wega mumwe ARM muchina mukirasi imwechete. Hazvingave zvakanaka here kana ivo vaigona kumhanya Linux zvakare?".
«Vanobuda vanogona, asi mumwe munhu anofanira kuita basa racho. Sezvo izvi zvishandiso zviri zvitsva uye zvakagadzirwa, kuisa Linux kushanda pairi ibasa rakakura. Kunze kweprojekiti yekunakidzwa, ibasa renguva yakazara«. Sezvaanotaura, ndechimwe chinhu kuisa Linux kushanda pane imwe x86 chishandiso, senge iyo PS4, kana kushanda paARM SoC ine IP cores, uye iri imwe kuzviita kune yakasarudzika-yakagadzirirwa chip uchishandisa iyo ISA ARM, sezvazviri neApple Silicon.
«Chinangwa ndechekupa Linux rutsigiro paApple Silicon Macs kusvika padanho parinenge risiri rekuratidzira kwehunyanzvi, asi asi sisitimu yekushandisa iyo munhu yaangade kushandisa pane chishandiso chezuva nezuva. Kuti uwane izvi, pane basa rakawanda rinofanira kuitwa. Kumhanya Linux pane chero chinhu kuri nyore, asi kuiwana kuti ishande zvakanaka kunonetsa. Vatyairi vanofanirwa kunyorerwa zvese zvishandiso. Iyo yakazara tsika Apple GPU mutyairi ndiyo inonyanya kuomarara chinhu, icho chakakosha kune yakanaka desktop desktop. Simba manejimendi rinofanira zvakare kushanda nemazvo kuti hupenyu hwebhatiri huve hunonzwisisika.«
Chero nzira, chinangwa ndechekuzadzisa iyo $ 4000 pamwedzi, yakaverengerwa naMartin yaizokwana kubhadhara basa rake renguva yakazara kuti aite iri basa rakakura uye rakaoma.
Linus Torvalds Zvikanzi "Dambudziko hombe neM1 kwandiri ndeyeGPU uye nezvimwe zvishandiso zvinoitenderedza, nekuti izvo zvinogona kunditadzisa kuishandisa nekuti yaisazove nerutsigiro rweLInux kunze kwekunge Apple yavhura.".
Hector zvinoita kunyanya kutarisira, kunyangwe Apple isingashande pamwe: «Kumhanya Linux pazvinhu kuri nyore, asi kuiwana kuti ishande zvakanaka kunonetsa. Vatyairi vanofanirwa kunyorerwa zvese zvishandiso. Yakazara tsika Apple GPU mutyairi chinhu chakaomarara...
Zvichava zvakafanira kuona kuti chirongwa ichi chose chinobuda sei, uye kana chikaitwa rimwe zuva, kana chikagona kushanda sehwaro hwekugadzirisa Linux ku shanduro dzemberi Apple Silicon nekukurumidza.
Shandira pamwe mumushandirapamwe pano
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Linux inotsigira Apple Silicon M1?
DwarFS, faira sisitimu yakagadzirirwa kudzikisira redundant dhata
Pluto TV inouya kuUbuntu Kubata muchimiro chewebhu webhu, asi zvinhu zvinofanirwa kugadzirisa (zvirinani paPineTab)